♪ Angel Shaper: အလုပ်ထဲမှာဗျာ..... ၁
Happy Friendship Days!
လေးစားပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိတာ ချီကျူးပါတယ်။
ဟုတ်တယ် တကယ်တော့ သိပ်ကြောက်ပြနေရင် မကောင်းဘူး...။ ကိုယ်မှန်တယ် ထင်ရင် ပြန်ပြောရဲတဲ့ သတ္တိတော့ ရှိဖို့လိုတယ်..။း))
သိပ်ကောင်းတယ်။ အခုလို ပြန်ပြောရဲတာ။ ပြန်မပြောချင်လို့ နေနေရင် အတယ်ထင်ပြီး ပိုနိုင်ချင်ကြတယ်နော်။ ကိုယ်မှန်ရင်တော့ တခွန်းချင်းစီ ပြန်ရှင်းနိုင် ပြန်ယှဉ်ပြီး ပြောနေရတယ်။ စားစရာမရှိလို့ အလုပ်လာလုပ်တယ်များ မှတ်နေသလား မသိဘူးနော်။ Dim ကြိုးစားထား။ ရေတမာနဲ့ ဒီတခါတော့ တည့်သွားပြီပေါ့။ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတာ ချီးကျူးတယ်။
ကောင်းပါတယ်.. ဖြစ်သင့်ပါတယ်.. ပြောသင့်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ..တစ်ခုတော့ ပြောချင်ပါတယ်..
သည်းခံ သင့်မသင့် ကိုတော့ .. ကိုယ်ဖာသာကိုယ် ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်..
နိုင်ငံခြားထွက်တဲ့လူတိုင်းကတော့ ကလေးတွေ မဟုတ်ကြဘူးလေ..
ကိုယ်ပိုင်အသိ.. ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက် ရှိကြပါတယ်..
နင့် မကျေနပ်မှုတွေကို သေချာဖတ်သွားတယ်
သူငယ်ချင်း သည်းခံသင့်တာတော့ သည်းခံပေါ့
ပလိန်းကြီးလာ စော်ကားလို့ ကတော့ တွယ်သာ
ဆိုရင်တော့ sorryပါပဲ သူဋ္ဌေးမကလို့
“မကျေနပ်ရင် ရော့ခြေမစုပ်”လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ် ကိုဆိုရင်သူဋ္ဌေးသမီးမွေးနေ့မှာသူဋ္ဌေးနဲ့ထထိုးမယ်လုပ်လို့ ညတွင်းချင်းအလုပ်တန်းပြုတ်တာ အိမ်လည်းရောက်ရော ဝီစကီလေးမော့ ကာရာအိုကေလေးနဲ့ကြော့လို့
စာရင်းထဲတောင်မရှိဘူးသူတို့ပေးတဲ့လစာကို တော်ပြီကွာ အိမ်ပြန်ပြီးလူမိုက်ပဲလုပ်တော့မယ် ဟေးးးး
နောက်နောင်မှာလဲ ဒီလိုပဲ စွာကြတာပေါ့နော်...
မှန်တယ်ထင်ရင် လုပ်သာလုပ် စွာသာစွာ
ဗလ အားကိုးနဲ့ဆိုတော့ မိုက်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်...
ဒါပေမယ့် ကစ်ဘောက်ဆင်သင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ အိမ်လာလည်ရမှာတောင် လန့်နေတယ်...
ဒီလိုမဟုတ်မခံ ပြန်ပြောတတ်လို့ ရိုင်းတယ်အပြောခံရတယ်...ဟုတ်တယ် ရိုင်းချင်ရိုင်းတယ်အပြောခံချင်ခံရမယ် .....လူ့ဂွစာအထင်ခံချင်ခံရမယ်..အမှန်တရားအတွက်
ငါတို့တွေ မကောက်ကျစ် မယုတ်မာဘူး...အသားလွတ် ရိုင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူး..ငါတို့ကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်မနစ်နာစေခဲ့ဘူး...ငါတို့ နှလုံးသားကို ငါတို့ ရဲရဲကြီး စစ်တမ်းအကောက်ခံရဲတယ်...သို့သော်
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ...သူငယ်ချင်း ရေ..
ညီမရေ.. ဖတ်ပြီး မောသွားပါတယ်။
သည်းခံသင့်တာခံ အမှန်အတွက်လည်း သတ္တိရှိ အန္တရာယ်တွေကိုလည်း ရှောင်ရင်း အလုပ်မှာ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေလို့
အထင်သေးလောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအုပ်ချုပ် ထားတဲ့ နိင်ငံကလာမှန်းသိလို့ရောကြောင့် ဒီလိုတွေ ဆက်ဆံနေကြတာပဲ။
အရမ်းကောင်းတယ်။ အတူတူပဲ။ မင်းအလုပ်ပြုတ်မှာ၊ ပြန်ပို့မှာ မကြောက်ဘူးလားတဲ့။ ငါလုပ်နိုင်တာ အကောင်းဆုံးငါလုပ်နေတယ်လို့၊ နောက်
ခြံတွေဝင်းတွေ၊ တိုက်တွေနဲ့ နေနိုင်တာ၊ အကြွေးသိပ်မရှိတာ (လုံးဝ မရှိတာ)၊
စတိုးဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် စင်္ကာပူရီးရန်း တွေ မျက်နှာ ဇီးရွက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်။
ဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ် အဲ့လိုဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ အဲ့လောက် ကောင်းတာ သူတို့ မသိကြဘူး။
ဗဲရီး ဂွတ်။ အားရလိုက်တာ။း) (အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါ တော့ ကြည့်ပေါ့နော့်၊ သူတို့ အရမ်းတင်းနေရင် လျှော့ထားလိုက်၊ သူတို့ ဒေါသလျော့သွားရင်တော့ ကိုယ့်အလှည့်ပဲ)
အမရေ ပြန်သာပြောဗျ အမှန်တော့ ဒီကောင်တွေက နှိမ်ချင်တဲ့သဘောနဲ့ ကိုယ့်ကိုဖြဲတာဗျ အထူးသဖြင့် မူစလင်တွေ အရမ်းမိုက်ရိုင်းတယ်.. လူလိုမသိတဲ့ကောင်တွေဗျ ။ ဒါပေမဲ့ သတိတော့ထား ဒီကောင်တွေ စိတ်ဓာတ်က အရမ်းအောက်တန်းကျတာဗျ...။ သူတို့အကြောင်း သိချင်ရင်တော့ ကျနော့်ဘလော့မှာ လင့်တွေ ပေးထားတယ် လာသာဖတ်ကြည့်ပေတော့ဗျို့။ မူစလင်ပန်း ဆိုတဲ့စာရဲ့ ကွန်မန့်ထဲမှာလဲ ရေးထားတယ်။ စီဘောက်မှာလဲ ရေးထားတယ်ဗျ...။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ လူတွေ ကိုဖတ်စေချင်တယ်ဗျာ...။
30 August 2009 at 03:25
နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းတစ်ပါးမှာ ကိုက ရဲရဲရင့်ရင့်ရှိရမယ်
မဟုတ်တာကို ငုံ့ခံစရာလဲ မလိုဘူး
ကို့နိုင်ငံမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးလွန်းလို့သာ တိုင်းတစ်ပါးမှာ အလုပ်လာလုပ်ရတာ ပညာလာရှာရတာ စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ထား သူငယ်ချင်း
ကို့အမှားမဟုတ်ဘဲ သူဌေးဖြစ်ဖြစ် ခွေးဖြစ်ဖြစ် လာပြောရင် ချက်ကျလက်ကျသာ ပြန်ဝေဖန်လိုက် သူတို့ နောက် နိုင်ထက်စီးနင်းမလုပ်ရဲဘူး
ဖြူစင် သတ္တိရှိတာကို သဘောကျတယ်
ဟေ့ တို့တွေ အပြင်မှာများ တွေ့ဖြစ်ရင် တပွဲတလမ်းလောက် စမ်းထိုးကြည့်ရအောင်လေ နော့် ဟိဟိ
ငါ့အစ်မလို့ မပြောရဘူး စပ်စပ်ထိမခံ ပါလား ဟဟဟ ကောင်းတယ် မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ပြန်ပြောနိုင်ရမယ် ဟုတ်တယ်မလား ကိုယ်မှ မမှားတာနော့်
မေ့သမီးကြီးအိန်ဂျယ်ရေ fighting ကွ ဟဟဟဟ အဂျားအဂျား ကြိုးစားထား ဟိဟိ ကိုရီးယားကားထဲကလို ပြောသွားတာ အဟက် ဘိုင်
အင်း အဆုံးသတ်ကို ကြည့်ရရင်တော့ စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ လေးစားသွားပါတယ် ... ဒါတွေအားလုံးရဲ့  တရားခံကို ပြန်ကြည့်ရင်တော့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေပါပဲ ... ပြည်သူတွေ ဒီဘ၀ရောက်အောင် ဖန်တီးခဲ့တာ သူတို့လေ .... အဓိက တရားခံက စစ်တပ်ပဲဗျ ... အုပ်ချုပ်မှုယန္တယားကြီး တခုလုံး ပျက်စီးနေမှတော့ တိုင်းပြည်လဲ မွဲပြာ ကျပြီး လူငယ်တွေ နိုင်ငံတကာမှာ မျက်နှာငယ်နဲ့ အလုပ်သွားလုပ်နေရတာကိုး .... အင်းနောက်ထပ်လဲ မရေးခြင်တော့ပါဘူး...
စိတ်လျှော့ .. စိတ်လျှော့။ =P
မှန်တယ်ထင်ရင် ပြန်ပြောရဲတာကို ချီးကျုးတယ်။ စာကိုဖတ်ရင်း သူငယ်ချင်းအတွက်တောင် ခံပြင်းသွားတယ်.
ကိုယ့်နိုင်ငံကို သိပ်ချစ်တတ်ပါတယ် မျိုးချစ်မြန်မာတစ် ယောက် အနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို လက်မထောင်ပြလိုက် ချင်တာပါ ဒါပေမယ့်လေ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲမြင်မြင် သမီးပျိုကတော့ “ဒါမြန်မာဟေ့“လို့ မဟစ်ကြွေးနိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတော့ ကိုယ့် နိုင်ငံကို အားမရဖြစ်မိသလို အားလည်းငယ်မိတယ် သယံဇာတတွေပေါကြွယ်လှတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါလျှက်နဲ့ လူတွေ အထင်သေးတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေရတာ မိုက်ရိုင်းလိုက်လေခြင်း
မဟုတ်ရင် မခံနဲ့ ကွ
ကိုယ်မှန်နေရင် ကြောက်နဲ့။
ရရင်ရ မရရင်ချ ..ဟဲဟဲ .
(ကိုယ်တော့ ရှေ့ ဆုံးက ပြန်ပြေးပြီ)
ဒေါသရှေ့ ထား မှားတတ်သည် ဆိုတာလေးတော့ မမေ့စေချင်ဘူး ကွယ် ( လေပြေ ပြန်ထိုး ပါသည် )။
ညီမလေးရေ.... ဖတ်ရင်နဲ့ ခံပြင်းလိုက်တာ....
ပြောချင်တာကို သွေးအေးအေးနဲ့သာပြော... သွေးမဆူမိစေနဲ့........ အပြုံး မပျက်စေနဲ့နော်....
ဘဝတူခြင်းတွေ... အမြဲ အားပေးနေပါတယ်....
ရိုးရိုးသားသားနဲ့ သာ အလုပ်ကို ကြိုးစားပါ၊ အမှား မပါအောင်လဲ ကြိုးစားလုပ်ပါ။ အပြောမခံရအောင်လဲ နေပါ။ လာပြောရင်လဲ မခံပါနဲ့ ။ အထိခိုက်မခံပါနဲ့ ။ အနှိမ်မခံပါနဲ့ ။ အလုပ်လုပ်တာ သခင်လိုပဲလုပ်ပါ။ ကျွန်လို မလုပ်ပါနဲ့ ။
ကိုယ်လဲ လူ၊ သူလဲလူပါ။ လူဟာလူပဲ ဘာမှမကွာပါဘူး။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အချင်းချင်းတောင် ပညာပြ၊ အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ သူတွေ ကြားရ၊ တွေ့ ရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ လုံးဝ အကျင့်မခံသလို၊ ကျွန်မလဲ မလုပ်တတ်ပါဘူး။
ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှ ဇွတ်မှိတ် အထင်မကြီးသင့်သလို၊ ခေါင်းငုံ့ ခံပေးစရာလဲ မလိုဘူးလို့ ကျွန်မမြင်ပါတယ်။
လူလူချင်းဟာ လူစိတ်မွေးပြီး Respect ပေးသင့်တယ် လို့ ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒီလောက်ပဲလေ။
ဘာကိုမှ မကြောက်ပဲ၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ကြစေချင်ပါတယ်။
oh! great girl.
I am really proud to know you
Yayyy!!! Bravo! ;D
ပြည်ပမှာ တ၀မ်းတခါး ရှာဖွေ စားသောက်ရတဲ့ ဒုက္ခကို ကြုံဖူးတဲ့သူတွေမှပဲ သိနိုင်တာပါ...
ကိုယ့်ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပါတယ် ငါ့ညီမရေ့...
မကြီးရေ တွယ်သာတွယ် အားပေးတယ်။ အခုဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်မှပဲ ပါးလုံးနဲ့တောင် တူသလိုပဲ။ သမိးလည်း ဒီမှာ တကယ်ကိုအတိုက်အခံပဲ။ မဟုတ်ရင်မခံနဲ့အမ ချသာချ အားပေးတယ်။ အချက်အလက်နဲ့သာတွယ်။ သမီးကတော့ တခုခုဆို အချက်အလက်နဲ့ ပြန်ချတာပဲ။ အားပေးတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ လူလူချင်းကို ဘာကျွန်မှခံစရာမလိုဘူး။ အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွပဲ။ ချသာချ။ အဟိမြှောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ အဲ့လိုကတော့ တကယ်ဘလိုင်းကြီးကိုနော်။
အဲ့လို ပြောရဲဆိုရဲတဲ့ သတ္တိမျိုးရှိအောင် အခုတည်းက ကျင့်ထားရမယ်နော် ... ဒါမှ အလုပ်ဝင်ရင် အဆင်ပြေမှာ... ကျေးဇူးပဲ အစ်မ
အနည်းနဲ့ အများ ခါးသီးရတာချည်းပဲ....
အိမ်ကိုအမြဲလာပြီး ဆုတောင်းပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင် ဝမ်းသာမိပါတယ်...
9 September 2009 at 05:09
မဟုတ်မခံ စိတ်နဲ့ သည်းခံပါကွယ်..း)